Hery mihoatra ny an'ny olombelona
“Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” . Rom. 8:1
Nampanantenaina ireo izay mitolona ho amin’ny fandresena ny Fanahy Masina, Izay maneho ny fahefan’ny hery amin’ny alalan’ny fanomezana tanjaka mihoatra ny an’ny olombelona ny mpiasa, no sady mampianatra ireo izay tsy mahalala ny amin’ny zava-miafin’ny fanjakan’Andriamanitra. Natao hanampy antsika ny Fanahy Masina. Tombontsoa manao ahoana no azontsika tamin’ny nanetren’Ilay lahitokan’Andriamanitra ny tenany, ny niaretany ny fakan’ilay fahavalo mpisompatra fanahy azy, sy ny fitolomany taminy nandritra ny fiainany teto an-tany, ny nahafatesany ho an’ny olo-tsy marina na dia marina aza Izy, mba tsy hahavery ny olombelona; raha tsy nomena antsika mba hiasa tsy miato ny Fanahy Masina, ary ho mpanavao mahomby ho an’ny toetsika, inona no mety ho nataon’Ilay Mpamonjy izao tontolo izao?
Ny fisian’ny Fanahy Masina tao anatin’ireo mpanaraka Azy no nahafahan’izy ireo nijoro tsara tsy nanaraka ireo sampy, ka tsy hanompo afa-tsy Andriamanitra.
Ny Fanahy Masina no nitarika ny penin’ireo mpanoratra ny tantara masina mba hahatonga ny teny sy ny asa sarobidy nataon’i Kristy ho azo naseho an’izao tontolo izao. Miasa tsy miato ny Fanahy Masina hisintomana ny sain’ny olombelona ho amin’ilay fanatitra lehibe natao teo an-kazo fijaliana tany Kalvary, mba hanehoana ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny olona, ary koa mba hanokafana ny teny fikasana sarobidy ao amin’ny Soratra Masina ho an’ny fanahy meloka.
Ny Fanahy Masina no mitondra ny taratra manjelatry ny Masoandron’ny fahamarinana ho an’ny saina voasaron’ny haizina, Izy ihany koa no mahatonga ny fon’ny olona hirehitra ao anatiny, amin’ny fahalalana ny fahamarinana mikasika ny mandrakizay. Ny Fanahy Masina no maneho ny fenitry ny fahamarinana amin’ny saina, ary mampiaiky ny fahotana. Ny Fanahy Masina no mahatonga ny alahelo noho ny fahotana ka mitondra ho amin’ny fibebahana noho ireo ota mila ibebahana,ary miteraka ao am-po finoana Ilay tokana afaka hamonjy amin’ny fahotana rehetra. Ny Fanahy Masina no miasa mba hanova ny toetra hanala ny fitiavan’ny olona ny zavatra mandalo sy mora lo, ka hibanjina ny lova tsy mety simba dia ilay maharitra mandrakizay. Ny Fanahy Masina no mamorona indray sy manadio ary manamasina ny olombelona, mba hahatonga azy ireo ho fianakavian’ny mpanjaka, zanak’Ilay Mpanjakan’ny lanitra. ST, 17 Aprily 1893.